मरेका मान्छेको सम्झना – Chitwan Post
स्व धर्मराज अर्याल
जन्म र मृत्युको रहस्य आजसम्म कसैले थाहा पाएको छैन, सायद् थाहा पाउँदैनन् पनि होला । रहस्यको रुपमा रहेको जन्म र मृत्युले आजसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । अरु नाम र आकारका प्राणीहरुको पनि जन्म र मृत्यु भइरहेको छ, आफूलाई सर्वश्रेष्ठ दाबी गर्ने मान्छेको पनि जन्म र मृत्यु भइरहेको छ । मान्छे आफू जन्मिएको थाहा पाउँदैन, मरेको पनि थाहा पाउँदैन । जन्म र मृत्युको बीचमा जीवन छ, यही अवधिमा मान्छेले आफू जीवित भएको महसुस गर्छ । तर, अकाट्य सत्यचाहिँ के रहेछ भने जब मान्छे मृत्युलाई व्यहोर्छ तब उसको सबै खालको अस्तित्व र उपस्थिति समाप्त हुँदोरहेछ । यति भईकन फेरि अर्को सत्य के पनि रहेछ भने मान्छे जन्मिएपछि मर्न नचाहने रहेछ । जीवनको यतिसम्म लोभ गर्दोरहेछ कि सकेसम्म मर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ठान्दो रहेछ । एकदिन मर्नुपर्छ, यो अन्दाज त मान्छे गर्दोरहेछ तर निश्चित समयमा मृत्यु हुन्छ भन्ने जानकारी हासिल नहुने हुँदा मान्छे मृत्युसँग असाध्यै डराउँदो रहेछ । मृत्युसँग नडराउने मान्छे संसारमा सायद् कोही छैनन् होला । एकातिर मृत्युसँगको डर र अर्कोतिर भौतिक सुविधामा फस्ने बानी त्याग्न नसक्ने कारणबीच मान्छेका लागि सधैँभरि मृत्यु एउटा भयानक डर बन्दोरहेछ र पनि त्यो डरसँग सामना गर्दै मान्छे धर्तीबाट बिदा हुनुपर्छ ।
आजसम्म जति पनि मान्छे जन्मिएर धर्तीमा आए, आफ्नो आयु समाप्त भएपछि बिलाए । कोही एउटा मान्छे पनि सधैँका लागि धर्तीमा बस्न पाएन । शरीर ल्याएको थियो, शरीर छाड्यो । शरीरलाई कुनै नाम दिइएको थियो, त्यो नाम छाड्यो । बाचुन्जेल कुनै पेसा अपनाएर पेसाले दिएको परिचय छाड्यो । बाँचुन्जेल बडो होसियारीपूर्वक सम्हालेर राखेको धन छाड्यो । सबै छाड्यो । केही लिएर आएको थिएन, केही लिएर गएन । केही समयका लागि कुनै भूमिका निर्वाह ग¥यो । ड्युटी पूरा भयो, गयो, बिलायो । सबै मानिसको नियति आजसम्म यही भएको छ ।
आज जीवितहरुको पनि नियति यही हुनेवाला छ । यतिबेला जीवितहरुको मह¤व आफ्नै ठाउँमा छ । जीवितहरुको जति मह¤व मरेकाहरुको हुँदैन, यो साँचो हो तर जीवित छँदा मेहनत गरेर देश र जनताको लागि काम गर्नेहरुलाई सधैँभरिका लागि बिर्सिने गरिएको जुन अवस्था छ त्योचाहिँ कताकता धर्ती छाडेकाहरुमाथिको अन्याय हो कि जस्तो लाग्छ । पहिले जीवित छँदा मरेर गएकाहरुले जति काम गरे, कर्तव्यको पालना गरे, राष्ट्रसेवा गरे तिनको सम्झना हुनैपर्छ । यदि हुँदैन भने यतिबेला जीवित, भोलि मर्ने लाइनमा उभिएकाहरुलाई कर्तव्य पालनाको अभियानमा हिँड्न जाँगर चल्दैन, सत्य यही हो । अब केही धर्ती छाडेका मान्छेहरु जसले जीवित छँदा समाजसेवा गरे, राष्ट्रसेवा गरे तिनलाई सम्झना नगरिएको अवस्थाबारे चर्चा गरौँ ताकि नेपाली नागरिक समाजको यतिबेलाको सोच र चिन्तनमा बदलाव आउन सकोस् र समाजले आफ्नो गल्ती सच्याउन सकोस् ।
स्व डा उपेन्द्र देवकोटा
चर्चाको सुरूआत गरौँ डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाबाट । गोर्खामा जन्मिएका डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले त्यस्तो सुविधाविहीन गाउँमा पढेर बडो कठिन मेहनतका साथ न्यूरो सर्जन भए । स्वदेश र विदेशका रोगीहरुलाई गर्नसम्म सेवा गरे । हजारौँको ज्यान जोगाए । तर, एकदिन उनलाई ठूलै रोग लाग्यो । आधुनिक विज्ञानले पत्ता लगाएका ओखतीहरु सबै प्रयोग भयो, तर उनी बाँचेनन् । एक–दुई वर्ष भयो उनी बितेको । बितेका बखत दुई–चार जनाले च्व च्व र कठै बिचरा भने, तर अहिले पूरै बिर्सिसके । जसले हजारौँ मान्छेको ज्यान जोगायो उसलाई आजसम्म कसैले कुनै पनि शीर्षकमा सम्झना नगर्नुजत्तिको अन्याय अरु के हुन सक्छ ? कम्तीमा डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको एउटा ढुंगाको मूर्ति गोर्खा जिल्लाको उनी जन्मिएको गाउँमा स्थापना गरिदिएको भए के खेर जान्थ्यो होला र ? के हजारौँ बिरामीको ज्यान जोगाउने उपेन्द्र देवकोटा कुनै एउटा सहिदभन्दा कुन कोणबाट तल हुन सक्छन् ? उनको मूर्ति उनको जन्मस्थलमा राखिदिएर उनको सम्मान गर्ने काम गर्न सरकारलाई फुर्सद भएन लौ भैगो, गोर्खा जिल्लाका जनप्रनिनिधिहरुले गर्दा पनि हुन्थ्यो यति सजिलोसँग गर्न सकिने काम । तिनले पनि फुर्सद नपाएर तिनका नातेदार वा उपेन्द्रले ज्यान जोगाएका कुनै व्यक्तिले गरे पनि हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य ! आजसम्म उपेन्द्र देवकोटाजस्तो बाँचुन्जेल सबैका लागि नभई नहुने पात्र बित्दा आज मुसा हराएको वा भँगेरा मरेको पाराले व्यवहार गरिनु कुनै पनि कोणबाट न्यायसंगत हुँदैन । तर, उपेन्द्रलाई आज यो देशले भुसुक्कै बिस्र्यो । अन्याय ग¥यो । अर्को डाक्टर बालकृष्ण थापाको पनि कुरा उस्तै छ ।
काभ्रे जिल्लाको कुशादेवीमा जन्मिएका, मध्यम वर्गीय परिवारका सदस्य थापाले बडो मेहनतका साथ आफूलाई डाक्टरको रुपमा चिनाए । न्यूरो सर्जन डाक्टर बालकृष्ण थापाले बंगलादेशबाट न्यूरो सर्जरीमा निकै मह¤वपूर्ण ज्ञान हासिल गरेर नेपाली जनताको सेवा गर्न बंगलादेशबाट नेपाल आए । भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालमा न्यूरो सर्जरी विभागका विभागीय प्रमुख थापाले छोटै अवधिमा हजारौँ बिरामीको सेवा गरे । अब पक्का मर्छ कुनै पनि हालतमा बाँच्दैन भन्ने अनुमान गरिएका कतिपय बिरामीको उनले जीवनरक्षा गरेका थिए । डाक्टर थापा चिकित्सकमात्रै थिएनन्, फुर्सदको समयमा साहित्य सिर्जना पनि गर्थे । उनका साहित्यिक रचनाहरु पुस्तकको रुपमा पनि बाहिर आएका छन् । जीवनभरि उनले चिकित्सक र साहित्य सर्जकको रुपमा नेपाल र नेपाली जनतालाई सेवा गरे । तर दुर्भाग्य ! बंगलादेशबाट फर्किने क्रममा बालकृष्ण थापा प्लेन दुर्घटनामा परी बिते । डाक्टर थापा जिउँदो छँदा उनको चाकडी गर्ने र ओखतीमूलोको लागि जीहजुरी गर्नेहरुको संख्या सयौँ हुन्थ्यो । यो पेसा वा त्यो पेसाका मान्छे भन्नै पर्थेन, विभिन्न पेसाका मान्छेहरु उनको क्लिनिकदेखि सुत्ने ओछ्यानसम्म चाकडीका लागि पुग्थे, तर जब डाक्टर थापा बिते ती चाकडीबाजलगायत सबका सबले उनलाई बिर्सिए । बेवास्ता पनि यस्तो खालको गरे कि मानौँ यो देशमा डाक्टर बालकृष्ण थापा नामको कुनै मान्छे छँदै थिएन । यस्तो अन्याय सायदै अरु देशमा गरिँदो हो ।
स्व डा बालकृष्ण थापा
डाक्टर थापालाई चिन्ने चितवनमै पनि हजारौँ छन् । ती हजारौँमध्ये आजसम्म कसैले डाक्टर थापाको सम्झनामा सबैजना मिलेर एउटा पुस्तक छापौँ कसैले भनेन । यदि उनको सम्झनामा उनको विशेषता जान्नेबुझ्नेहरुले एक पुस्तक प्रकाशन गर्ने हो भने उनको योगदानको कदर हुन्थ्यो । जिउँदोमा गरेको कामको मूल्यांकन मरेपछि पनि हुन्छ भन्ने यस्तो खालको प्रमाणले अरु डाक्टर र अरु पेसाका मान्छेलाई कर्तव्य पालनामा जाँगर चल्थ्यो, तर यो पुण्यकर्म गर्न कसैले चासो देखाएनन् । यहाँनेर पनि अर्को डाक्टरमाथि अन्याय भएको छ जसले जीवित छँदा देश र जनताको सेवा गरे । देशले डाक्टर थापाबाट लिनसम्म सेवारुपी सहयोग लियो, तर दिनचाहिँ केही दिएन । खासै खर्च नलाग्ने सम्मान दिएको भए हुन्थ्यो, त्यो पनि दिने काम भएन ।
अब पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेर बितेकाहरुको पनि कुरा गरौँ । यही चितवन पोष्ट दैनिकका सम्पादक धर्मराज अर्यालले आफूले खाइनखाइ आफ्ना कर्मचारीलाई पालेर पत्रिकालाई निरन्तरता दिए । नेपाली नागरिक समाजको सुसूचित हुने अधिकार रक्षाका लागि रात–बिहान केही भनेनन् । कफ्र्यू लागेको रात होस्, वा टन्टलापुर घाम वा असिना र पानी बर्सिएको समय किन नहोस्, धर्मराज अर्यालले चितवन पोष्टलाई कुदाइरहे । चितवन पोष्टमार्फत उनले तीन दर्जनभन्दा ज्यादा देशलाई माया गर्ने पत्रकारहरु जन्माए । आज ती पत्रकारहरु देश र विदेशमा समेत काम गरिरहेका छन् । एक पत्रकारले देशलाई जति योगदान दिन सक्छ त्यति योगदान धर्मराज अर्यालले दिए । तर भयो के भने आज एक वर्ष भयो धर्मराज अर्यालले धर्ती छाडेका, अहिलेसम्म चितवनका जनताले कुनै पनि शीर्षकमा धर्मराजको सम्झना गरेनन् । पत्रिका पढ्नेले गरेनन् । सरकारले गरेन । महानगरपालिकाले गरेन । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेनन् । अरुले त गरेनन् गरेनन्, तिनका चेला पत्रकारहरु समेतले भेला भएर एकदिन उनको योगदानबारे चर्चा गरेनन् ।
उनको जीवनीको रुपमा कुनै पुस्तक छापेनन् । दुर्भाग्य ! जिल्लाका सिनियर पत्रकारलाई सम्झेर पत्रकार महासंघ चितवनले समेत उनको सम्झना र सम्मानमा कुनै कार्यक्रमको आयोजना गरेन । उनको घोर अपमान भएको छ, तर पनि आजसम्म उनलाई कसैले सम्झेन । सम्झिन्छन् होला उनका परिवार र इष्टमित्रले वर्षमा दुईपटक श्राद्ध गर्ने नाममा । होइन भने लाग्छ, अब ती धर्मराजको कसैले सम्झना गर्ने छैनन् । उनलाई सधैँभरि अन्याय भइरहने छ ।
स्व जीवराज अर्याल
प्रबन्ध सम्पादकको पनि पत्रिकालाई निरन्तरता दिने सवालमा कम योगदान हुँदैन । धर्मराजका भाइ जीवराजको पनि चितवन पोष्टलाई जिउँदो राख्न ठूलै योगदान थियो । उनी पनि बिते । उनको पनि सम्झना आज कसैलाई छैन । यो तरिकाले आज नेपाली नागरिक समाज बडो निर्दयी हुँदै गइरहेको छ । यो निर्दयीपनले समाज र राष्ट्रलाई फाइदा होइन, घाटै पार्छ । जिउँदाको अगाडिमात्रै गिडगिडाउने होइन, जीवित छँदा समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिनेलाई पनि कदर गर्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ । अरु प्राणीले यो तरिकाले बितेकाहरुलाई सम्झिन सक्दैनन् । त्यो तागत मान्छेमा मात्रै छ । हामीले हामीलाई पूरा मान्छे भन्ने दाबी गर्छौं । पूरा मान्छे हुनुको नाताले हामीले जीवित हुन् वा मरेका किन नहून्, योगदानको कदर र सम्झना भने गर्नैपर्छ । यो वा त्यो पेसाको होइन, हरेक पेसामा आबद्धहरुको योगदानलाई स्मरण गर्नुपर्छ । सम्मान गर्नुपर्छ ।